I-OEM SUP-WZPK RTD Izinzwa zokushisa ezine-mineral insulated resistance thermometers ifektri nabakhiqizi |I-Sinomeasure
Ibanga elibanzi lokulinganisa
Ngenxa yobukhulu bayo bangaphandle obuncane kakhulu, le nzwa ye-thermometer yokumelana ingafakwa kalula kunoma iyiphi into encane yokulinganisa.Isetshenziswa emazingeni okushisa ahlukahlukene, ukusuka ku -200℃ kuye ku +500℃.
Impendulo ivela ku- Ouick
Le nzwa ye-thermometer yokumelana inomthamo omncane wokushisa ngenxa yobukhulu bayo be-smail futhi izwela kakhulu ekushintsheni okuncane kwezinga lokushisa futhi inempendulo esheshayo.
Isici sayo esivumelana nezimo (i-radius egobayo ngaphezu kokuphindwe kabili kwedayamitha yangaphandle yesheath) yenzela ukufakwa okulula nokukhona endaweni kube ukulungiselelwa okuyinkimbinkimbi.Iyunithi yonke, ngaphandle kuka-70mm ekugcineni, ingagotshwa ukuze ilingane.
Ngokuphambene nezinzwa ezijwayelekile zokumelana ne-thermometer ezinokuwohloka kwevelu yokumelana nobudala noma amasekhethi avuliwe, njll., izintambo eziholayo zenzwa ye-thermometer nezici zokumelana zigqunywe nge-magnesium oxide ezinzile ngamakhemikhali, ngaleyo ndlela kuqinisekisa impilo yesevisi ende kakhulu.
Amandla emishini amahle kakhulu, nokumelana nokudlidliza.
Ukusebenza okuphezulu kuqinisekiswa ngisho nangaphansi kwezimo ezingezinhle njengalapho kusetshenziswa ekufakweni okudlidlizayo, noma endaweni egqwalayo.
Amadayamitha angaphandle weshethi angokwezifiso ayatholakala
Amadayamitha angaphandle we-sheath ayatholakala, phakathi kuka-0.8 no-12 mm.
Ubude bangokwezifiso buyatholakala
Ubude butholakala bufika ku-30 ​​m ubukhulu, kuye ngokuthi ububanzi bangaphandle be-sheath.
Uhlobo lwenzwa ye-Resistance thermometer
Inani lokumelana lokuzisholo liku-℃ Ikilasi Isilinganiso samanje R(100℃) / R(0℃)
I-Pt100 A Ngaphansi kwe-2mA 1.3851
1. R(100℃) yinani lokumelana lesisivi sezinzwa ku-100℃.
2. I-R(0℃) inani lokumelana le-resistor yezinzwa ku-0℃.
Ukucaciswa Okujwayelekile Kwenzwa Ye-thermometer Yokumelana
Umgodla I-conductor wire Umgodla Cishe
ubude obukhulu isisindo
I-OD(mm) I-WT(mm) Okubalulekile I-Dia(mm) Ukumelana ngocingo ngalunye Okubalulekile (m) (g/m)
Φ2.0 0.25 I-SUS316 Φ0.25 - I-Nickel 100 12
Ukubekezelela ama-RTD kuya kuzinga lokushisa kanye neThebula Elijwayelekile Elisebenzayo
I-IEC 751 I-JIS C 1604
Ikilasi Ukubekezelela (℃) Ikilasi Ukubekezelela (℃)
I-Pt100 A ± (0.15 +0.002|t|) A ± (0.15 +0.002|t|)
1.Ukubekezelela kuchazwa njengokuchezuka okuphezulu okuvumelekile kusukela kuthebula lereferensi yokumelana nokumelana.
2. l t l=modulus yezinga lokushisa ngamadigri Celsius ngaphandle kokubheka uphawu.
3. Isigaba sokunemba 1/n(DIN) sibhekisela ekubekezeleleni okungu-1/n kwesigaba B ku-IEC 751
Izinzwa ze-SUP-WRNK Thermocouples ezinama-mineral ins...